June 6, 2017 – Gool FM
PSG oo James Rodriguez kula dheggan Man Utd & Inter Milan
(Paris) 06 Juunyo 2017 – Paris Saint-Germain ayaa kusoo biirtay kooxaha Inter Milan iyo Manchester United oo wada cayrsanaya weerarka…
Xiriirka loo jaray Qadar oo jug wayn u gaystey hilinka BeIn Sports! (Xanibaad dhacday & tebiyayaal is casiley)
(Dooxa) 06 Juunyo 2017 – Ilaa 6 dal oo Carbeed ayaa shalay ku dhawaaqay go’aan la yaab lahaa oo xiriirka…
Liibaan Fantastic June 6, 2017
Maxaa ka soo kordhay heshiis kordhintii Messi ee Barcelona?
(Barcelona) 06 Juunyo 2017 Warar laga helayo gudaha Barcelona ayaa sheegaya in Lionel Messi uu qarka u saaran yahay inuu qalinka…
(Istanbul) 06 Juunyo 2017 Kabtankii xulka qaranka Turkiga ee Arda Turan ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu iska casilay ciyaaraha xulkiisa.…
(Milano) 06 Juunyo 2017 – AC Milan ayaa door bidaysa in haddiiba ay iibinayaan Gianluigi Donnarumma ay siiyaan Real Madrid…
MUUQAAL: Ricardo Rodríguez oo goor dhowayd kasoo degey Milano! ”Waan ku faraxsanahay inaan halkan imaaddo – Forza Milan”
(Milano) 06 Juunyo 2017 – Sida ay sheegayaan wararka haatan soo baxaya, Ricardo Rodriguez, oo ah daafac dadabka bidix ka…
Wakiilka Mario Balotelli oo xaqiijiyay inuu ku biirayo Borussia Dortmund
(Dortmund) 06 Juunyo 2017 Wakiilka weerar yahanka reer talyaani ee Mario Balotelli ayaa sheegay in laacibku uu ku sii jeedo kooxda Borussia…
Muxuu ka yiri Sead Kolasinac ku biiritaankiisa Arsenal?
(London) 06 Juunyo 2017 Daafaca cusub ee kooxda Arsenal Sead Kolasinac ayaa ka hadlay ku soo biiridiisa kooxda tababare Arsene Wenger. Wuxuu…
Massimiliano Allegri oo ku dhaw inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo Juventus
(Torino) 06 Juunyo 2017 Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa ku sii dhawaanaya inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa. Allegri ayaa…
Byare June 6, 2017
Lionel Messi oo Barcelona u sheegay inay la soo wareegaan 4-tan laacib si ay ula tartamaan Real Madrid
(Catalonia) 06 Juunyo 2017. Sida ay sheegayaan warar cusub oo ka soo baxay Spain in Lionel Messi uu kooxdiisa Barcelona…